Transportée - Französisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: transportée (Französisch - Burmesisch)
နွားသငယ်နှင့်အတူ အာရှုရိပြည်သို့ ယူသွားပြီး လျှင်၊ ရှင်ဘုရင်ယာရက်အား ဆက်ရကြလိမ့်မည်။ ဧဖရိမ်သည် အသရေပျက်၍ ဣသရေလသည် မိမိအကြံ အစည်အားဖြင့် ရှက်ကြောက်ရလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်ကို ကားဒါဝိဒ် ပြင်ဆင်သောအရပ်၊ ယေရုရှလင်မြို့၌ ဆောက်နှင့် သောတဲသို့ ကိရယတ်ယာရိမ် မြို့မှ ဆောင်ခဲ့သော်လည်း၊
Le pousse-pousse comme moyen de transport tiré par un être humainaété considéré comme une violation des droits de l'homme.
အယုတ်​စွ​ဆုံး အချိန်​အနည်းငယ်​ပေး​၍​တော့ စောင့်​ရ​ပေ​ဦး​မည်။
Toutefois, le PDS n’a pour l’instant fourni aucun détail quant au début des travaux ni au coût du projet. En ce qui concerne l’utilisation de téléphérique urbain, la capitale se dotera d'un mode de transport en commun qui existe à la Paz.
Aucun expert ne l’a vu, ni certifié qu’il s’agissait bien d’uranium. S’il était si radioactif, pourquoi était-il transporté comme du sable ?
အရွဲ့တိုက်ခြင်းများအပါအဝင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် မှတ်ချက်များမှာ လူမှုကွန်ရက်များတွင် #uranioဟူသော တွစ်တာခေါင်းစဉ်အောက်၌ ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
Il était peut-être en transit vers un autre pays, dit le vice-président Pérez. Les internautes ont surtout critiqué le manque de précaution à l’heure de transporter un métal potentiellement radioactif.
Pourtant, les pousse-pousse "traditionnels" restent le principal moyen de transport pour de nombreux habitants d'Antsirabe.
အများ​ပြည်​သူ​သုံး​ယာဉ်​စနစ်​သည် အတိုးတက်​မြန်​လွန်း​သော မာ​လ​ဂါ​စီ လူ​ဦး​ရ​အေား အမီလိုက်​နိုင်​ရန် ကြိုးပမ်း​နေ​သည်။
Les transports publics sont un problème bien connu dans la capitale.
ထို​မြို့တော်​တွင် လူ​နှစ်​သန်း​ခန့် နေထိုင်​ပြီး မှန်းခြေ​အရ ကား​အစီး​ရေ​စုစုပေါင်း ၁⁠၁​၀⁠၀​၀​၀ ရှိ​သည်။
လာ​ပတ်(ဇ်)တွင် ရေ​ဒီ​ယို​သတ္တိ​ကြွ ယူ​ရေ​နီ​ယမ်​များ ဖမ်းဆီး​ရမိ
အများ​ပြည်​သူ​သုံး​ယာဉ်​များ​နှင့် ပတ်သက်​သည့်​ပြဿနာ​မှာ မြို့တော်​တွင် လူ​သိ​ပြီး​သား ပြဿနာ​တစ်​ခု​ဖြစ်​သည်။
Et pour couronner le tout, les maux concernant l'eau en Inde incluent des problèmes de contamination, d'insuffisance, de refus, de corruption, de transport et d'accès, de mort et de maladies, de pollution, de croissance industrielle irresponsable et dépendante de l'eau, et bien plus encore.
ထို့​အပြင် အရှေ့​ပိုင်း အိန္ဒိယ​က​မူ မည်သို့​မျှ အကူအညီ​မ​ပေး​နိုင်​သော အမြင့်​ဆုံး မိုး​ရေ​ချိန်​ကို ပိုင်ဆိုင်​နေ​ပြန်​သည်။
ပရောဖက်ဥာဏ်ကို ငါရ၍၊ နက်နဲသော အရာရှိ သမျှတို့နှင့် သိပ္ပံအတတ်အမျိုးမျိုးကို တတ်သော်၎င်း၊ တောင်များကိုရွှေ့နိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့် ပြည့်စုံသော်၎င်း၊ မေတ္တာမရှိလျှင် အချည်းနှီးသက်သက် ဖြစ်၏။
et ils furent transportés à Sichem, et déposés dans le sépulcre qu`Abraham avait acheté, à prix d`argent, des fils d`Hémor, père de Sichem.
ဗိမာန်တော်ထဲ၌ အဆောက်အဦးကို အဘယ်သူမျှ မဆောင်မရွက်ရမည်အကြောင်း မြစ်တားတော် မူလျက်၊
သင်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောကြောင့် မနှင်ထုတ်နိုင်ကြ။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် မုန်ညင်းစေ့ခန့်မျှလောက်သော ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင်၊ ထိုတောင်ကို နေရာမှရွေ့လော့ဟုဆိုကြသော်၊ နေရာမှ ရွေ့လိမ့်မည်။ ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် သင်တို့မတတ်နိုင်သောအမှုမရှိ။
tahniah kerana dapat menantu (Malaysisch>Englisch)oh brame (Englisch>Kanaresisch)kasalungat ng natotodas (Tagalog>Englisch)bala kaban (Malaysisch>Englisch)dato signo (Latein>Englisch)wish youahappy journey and god bless you all (Englisch>Hindi)hal ini berlaku kerana (Malaysisch>Chinesisch (Vereinfacht))mi garay (Englisch>Tagalog)bagay tayo sa isat isa (Tagalog>Englisch)dito ka lang sa buhay ko (Tagalog>Englisch)tere dard se mujhe bhi takleef hota hai (Hindi>Englisch)kinasuhan (Tagalog>Englisch)masusing pagkilatis (Tagalog>Englisch)leadership awardee (Englisch>Tagalog)mein apko nhi bta skti (Hindi>Englisch)bagi memudahkan segala urusan (Malaysisch>Englisch)tu estas hablando ingles (Spanisch>Englisch)kufunga kizazi (Swahili>Englisch)it's raining cats and dogs (Englisch>Tagalog)as i have understood (Englisch>Russisch)mimi ni vizuri sana rafiki yangu, asante sana (Swahili>Englisch)bakit mo ba ako tinatanong (Tagalog>Englisch)ohrabrujući (Serbisch>Englisch)tu aimes le sport (Französisch>Englisch)so sweet both of child (Englisch>Hindi)